US in US$60.55 million donation to hunger-stricken Zimbabwe through WFP - NewZimbabwe.com US in US$60.55 million donation to hunger-stricken Zimbabwe through WFP - NewZimbabwe.com
US in US$60.55 million donation to hunger-stricken Zimbabwe through WFP
In a statement Monday, the US Embassy in Harare said the money will go towards the World Food Programme’s (WFP) 2020/21 Lean Season Food Assistance programme for the troubled country.
The lean season assistance begins in August and will feed nearly one million people during the peak of the season – from January to April 2021 according to WFP.
Announcing the aid, American Ambassador to Zimbabwe, Brian Nichols said, “The United States remains committed to responding to the humanitarian situation, providing critical food assistance to Zimbabwe’s most vulnerable, while responding to the Covid-19 pandemic and maintaining essential services.”
In June, USAID announced a US$10 million to ensure that nearly 100 000 people in Zimbabwe’s eight urban areas have access to adequate food supplies between July and December 2020.
“WFP would like to thank the American people for their generosity and steadfast commitment to the people of Zimbabwe at this critical time. Our Lean Season Assistance programme addresses the urgent food needs of the most vulnerable Zimbabweans, who are facing a triple threat of climate induced drought, economic crisis, and the Covid-19 pandemic,” said Balzer.
Since Zimbabwe’s independence in 1980, the United States has invested nearly $3.2 billion in Zimbabwe through projects, including initiatives to increase food security.